The Ab Presents Nepal » प्रहरीको डण्डाले पनि चेत खुलेन क्षेत्रीको, झन उग्र बन्दै!
प्रहरीको डण्डाले पनि चेत खुलेन क्षेत्रीको, झन उग्र बन्दै!
नेपालमा जेठ १७ देखि जेठ २८ गते सम्ममा महाभुकम्प जान भनेर ठोकुवा गरेर जनजीवनमा त्रास फैलाएको भन्दै प्रहरी खोरमा गएर हिजो मात्रै छुटेका ज्योतिष भनिने अर्जुन क्षेत्रीले आफुले गरेको भविश्यवाणी सहि सावित भएको दावी गरेका छन्। आफुले भुकम्प जान्छ भनेर नभनेको तर जेठ १७ देखि २८ गते सम्म प्राकृतिक विपत्ती जान सक्छ मात्र भनेको र त्यहि आधारमा आफुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताए ।
उनले आफुले भुकम्प जान्छ नभनेको तर मिडियाले हेडलाइन झुटो बनाएर आफुलाई बदनामीत बनाएको समेत आरोप लगाएका । जेलबाट छुटे लगत्तै यथार्थ जानकारी दिन भन्दै फेसबुक लाइभमा आएका क्षेत्रीले आफुले भविश्य वाणी गरे अनुसारनै कैलालीमा विनाशकारी हावाहुरी चलेको समेत दावी गरेका छन् । आफुले त्रास फौलाउँन खोजेको नभइ आउँन सक्ने विपत्ती बाट बच्न अनुरोध गर्दा जेल पर्न परेको भन्दै क्षेत्रीले दुखेसो गरेका छन् ।
सत्यको बाटो हिड्दा ठेस लागेको रुपमा मात्रै आफुले जेल जानु परेको कुरालाई लिएको क्षेत्रीले भनेका छन् । आफुले सँधै सत्य मात्रै बोलेको बताउँदै उनले फेरी पनि पुुरानो धन्दा कायम राख्ने संकेत गरेका छन् । आफ्नो नाम जोडेर कतिपय मान्छेले चर्चाका लागी विभिन्न इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्को तर उनिहरु कसैलाई पनि आफुले नचिन्ने दावी क्षेत्रीले गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो अनुहार विगारेर विभिन्न प्रोपोगाण्डा गरिएको भन्दै उनले त्यस्ता मानिसलाई साइबरक्राइम लगाएर ठिक पार्ने पनि चेतावनी दिएका छन्।
जेलबाट छुटेपछि पहिलो पटक फेसबुक लाइभमा आएका क्षेत्रीले जेलबाट पनि आफुले ठुलो शिक्षा पाएको बताए । उनले भने मैले जीवनमा कहिल्यै नपाएको शिक्षा जेलबाट पनि पाएको छु म प्रहरी, अदालत र सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस्ता सानातिना कुराहरुबाट आफु विचलित नहुने भन्दै क्षेत्रीले सत्यको पथमा हिड्दा कहिलेकाँही काँडा विझ्ने पनि बताएका छन् ।
भुकम्प आएको थाहा पाउँने प्रहरी आएको थाहा नपाउँने कस्तो ज्योतिष हो? भन्नेहरुका लागी पनि अर्जुन क्षेत्रीले जवाफ फर्काएका छन् ,उनले आफुलाई प्रहरी आएर पक्राउ गर्ने कुरा पहिल्यै थाहा भएको पनि बताएका छन् । आफुले पहिलेनै मैलै यस्तो भन्दा प्रहरीले मलाई पक्राउ गर्न सक्छ पक्राउ परे पनि सत्य कुरा भन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराएका छन् ।